AbakwaGenerac bethula inkinobho yokuqala yokudlulisa okuzenzakalelayo ngomsebenzi odidiyelwe wokuqapha amandla ekhaya
I-Waukesha, Wisconsin, Mashi 27, 2020 / PRNewswire / - Ukuphela kukagesi kusuka e-East Coast kuya e-West Coast sekuholele ekutheni sikhule kakhulu isidingo sama-generator asiza amakhaya. Ngokwanda kwezikweletu zikagesi1, ukuqashwa kwamandla okusha kweGeneracⓇ Power Systems (NYSE) iPWRview ™ othomathikhi ...
Hlola ama-horizons amasha u-5G aletha ku-Intanethi Yezimoto nokuxhumana kwe-V2X
I-ITProPortal isekelwa izethameli zayo. Lapho uthenga ngokusebenzisa isixhumanisi esikuwebhusayithi yethu, singathola ikhomishini yokubambisana. Funda kabanzi Manje njengoba sine-Internet of Vehicles technology (V2X), siyabonga ngokuhlanganiswa kobuchwepheshe be-5G nezixazululo zesoftware yezimoto ...
I- "Smart Grid" izokhanyisa i- "Smart Sudian"
Ngokuvamile, "amandla amaSoviet ahlakaniphile" kanye "negridi ehlakaniphile" kubonakala kungahlangene ngalutho nomunye. Uma ubheka ngokoqobo, la magama amabili anokufana "nohlakaniphile". Futhi ake sibheke okuqukethwe yinkampani "Smart Sudian˙ Happiness and P ...
Umkhuba wentuthuko nethemba lomkhakha wezinto ezisebenza ngogesi ophansi
1. Ukuhlanganiswa mpo Uma umkhiqizi echazwa njengomkhiqizi wezinto ezinamandla kagesi aphansi, umthengi omkhulu wemikhiqizo kagesi yamandla amancane ingumboni wemishini yamandla kagesi aphansi. Laba basebenzisi abaphakathi bathenga izinto ezinamandla kagesi aphansi, bese behlanganisa ...